Akanjo efatra ho an'ny iPad Mini | Vaovao IPhone
Tranga efatra ho an'ny iPad Mini anao
Ho avy ny fialantsasatry ny Noely, ary azo antoka fa raha manana iPad Mini ianao dia mieritreritra ny hividy takelaka fiarovana tsara kalitao, na mikasa hanome fanomezana ho an'ny olona iray ianao. Efa ela isika no niresaka momba ny fonony tsara tarehy maromaro hiara-miasa amin'ny iPad, ary anio isika dia hahita zavatra mahaliana ho an'ny iPad Mini. Manomboka amin'ny OtterBox Defender ho an'ny iPad Mini, mpialokaloka eny ivelan'ny lalana. Raha fantatrao ny vokatr'ity marika ity, dia ho fantatrao fa natao hiarovana ny fitaovanao amin'ny toe-javatra faran'izay henjana indrindra izy ireo, ary tsy handiso fanantenana ity tranga ity. Izy io dia misy tranga silipo izay mifanaraka tsara amin'ny fitaovanao, miaraka amin'ny mpiaro efijery mirindra, ary koa fonosana ao ambadiky ny polycarbonate izay manohana. Fiarovana lehibe indrindra ho an'ny 61,54 euro amin'ny Amazon.es.
Nanova ny fomba fanaonay izahay, ary izao mijery ny fonony izao Raharaha Griffin ZigZag Folio ho an'ny iPad Mini. Sarona vita amin'ny boky miaraka amina endrika zigzag manaitra, misy amin'ny loko isan-karazany. Ny fonony eo aloha dia lasa mijoro hametraka ny iPad amin'ny toerana marindrano sy marindrano, ary izy koa dia manana mpihazona ho an'ny stylus. Manana izany ianao amin'ny Amazon.es ho an'ny 32 euro.
Speck dia manolotra antsika ny fonony Tranga FitFolio ho an'ny iPad Mini. Tranga manify iray izay zara raha manampy ny hatevin'ny iPad Mini, miaraka amina lamosina plastika mafy izay mifanentana tanteraka amin'ny fitaovanao, ary fonony ahafahanao mametraka ny fitaovanao amin'ny toerana samihafa. Ny fonony dia misy amin'ny loko sy lamina isan-karazany, toy ity amin'ny haran-dranomasina misy voninkazo hitanao ity Amazon.es ho an'ny 32 euro.
Ary manohy amin'ny Speck izahay, fa amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny fonony miaro natao ho an'ireo ankizy kely ao an-trano. ny Speck Mini iPad iGuy Case Io no vahaolana tonga lafatra ho an'ny ankizy amin'ny fampiasana ny iPad sarobidy nefa tsy mila risika. Manana "sandry" roa ny tranga izay manampy ny kely hitazona mora foana ilay fitaovana, ary misy loko maro manintona azy io. Amin'ity fonony ity dia tsy hisy olana amin'ny fianjerana, satria saika tanteraka ny fiarovana. Hita ao amin'ny Amazon.es ho an'ny 26 euro.
Fanazavana fanampiny - Akanjo milay hiasa miaraka amin'ny iPad anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tranga efatra ho an'ny iPad Mini anao
IOS 6 About sandoka: sandoka ny mombamomba ny iPhone (Cydia)
Ahoana ny fomba hanerena fampiharana akaiky ao amin'ny iOS 6